Sarahah Shaaca Tool | HacksDirect
Waxa uu ahaa dhawr bilood, iyo app bulshada this la odhan jiray "Sarahah" ayaa shaaca ka qaaday in ka badan nus ka mid ah waqtiga dadka qaatay on warbaahinta bulshada. Tani ayaa noqday 'mawduuc kulul' cusub qof walba waxa uu ka hadlayaa oo la isticmaalayo waqti isku mid ah. Sidaas waxa run ahaantii waa Sarahah? Waa codsi ah in kuu ogolaanayaa inaad soo diraan fariimaha qarsoodi ah in dadka isticmaala ay, oo ay tahay wax wanaagsan oo arrintan ku saabsan waa in aadan lahayn inaad naftaada diiwaan on in ay awoodaan in ay soo diraan fariimaha. Haddii aad ku sugan tahay niyadda ma si ay u helaan, kaliya u diro oo aan haysan si diiwaan; oo hubaal waxan oo badan oo rar qaadataa off garbaha qof.
App waa wax fudud in ay ku shaqeeyaan. All inaad sameyso waa download it to your Android ama macruufka iyo aad u bilowdo. Haddii aad rabto in aad u hesho farriimaha ka dibna, waayo,, waxaad yeelan doontaa in aad naftaada diiwaan app by siinta macluumaadka sida magaca iyo cinwaanka email. Waxaa sidoo kale jira website a in aad heli kartaa, kaliya haddii ay dhacdo aadan haysan telefoonka, inay arkaan wixii fariimo aad helayso. app waxay u muuqataa sidii mid xiiso iyo gaar ahaan dhalinyarada waayo, ma ay u ekaan kartaa si aad u hesho off waxaa ka mid ah waqti kasta ugu dhakhsaha badan.
Marka dadka la siiyaa fursad ay wax qof odhan aan haysan si ay daaha ka aqoonsigooda, iyagu ma u muuqdaan in ay u gudbo guddiga. Sida ugu badan ee this helo oo xiiso leh, waxa uu helo wax yar oo cajiib ah in qofkii kale in la ogaado yaa waxaa diraya fariimaha oo dhan kuwa. Waxaad doonaysaa in aad ogaato waqtiga ayaa aad u bogi qarsoodi ah oo dhan ama si kale ku wareegsanaa. Sideed dareemi lahayd haddii aad hesho in la ogaado in ay jiraan ugu dambeyntii waa wax kaa caawinaya in aad crack magacyada kuwa? Pretty ugu faraxsanahay, xaq u? Well ka dibna, naftaada u dhuujin, sababtoo ah waxa aan ku leenahay qorshe aad dhab ahaantii waxaa laga sugayaa inay dilaan cajiib in idinkaa.
Sarahah waxay daaha ka aalad waa nooc ka mid ah hack galay app oo kuu ogolaanaysaa inaad ogaato magacyada iyo aqoonsiga kuwa kuu dirayaa kuwa fariimaha qarsoodi ah. Waxay leedahay nidaam la ogaado a by kaas oo cinwaan IP ee user ayaa dabagal, ka dibna faahfaahinta la xiriira sida magaca iyo cinwaanka email waxaa lagu soo bandhigay in Helidda ka mid ah. qalab ma aha in si kasta oo sharci-darro ah, sidaa darteed uma baahnid inaad wax laga walwalo aad ugu isticmaalin,. Waxaa kaliya waxaa si aad noloshaada ka dhigi yar cajiib ah wax yar ka.
Fursadaha la this qalab daaha ka yihiin dhammaadka lahayn. Waxaad hadda leeyihiin fursad ay ku ogaadaan waxa ay dadka goobta shaqada qabaa adiga kugu saabsan ama in dadka aad u yeedhin saaxiibbadaada yihiin run ahaantii aad saaxiibadaa ama ma. Cirku ayaa inoo xad la qalab this; in uu yahay ilaa iyo inta dadka aad u hesho in la ogaado waxa ku saabsan oo joojiso isticmaalka app Sarahah ah in meesha ugu horeysa. Sidaas, ilaa ay taasi dhacdo, isticmaasho fursad inuu ka jawaabo su'aalaha oo dhan in aad madaxa kuwa our Sarahah Muujin qalab.
Isku day oo wuxuu ku raaxaysan!